उत्तर कोरियामा अब कुकुर पाले जे’ल ! घरपालुवा कुकर जफत गरेर सरकारले कुकुरको मासु बाँड्ने भन्दै किम जोङले दिए आदेश – Narayani Dainik
उत्तर कोरियामा अब कुकुर पाले जे’ल ! घरपालुवा कुकर जफत गरेर सरकारले कुकुरको मासु बाँड्ने भन्दै किम जोङले दिए आदेश
काठमाडौ । देशमा भोकमरी लागेपछि उत्तर कोरियामा कुकुर पाल्न प्रतिबन्ध लागेको छ । सरकारले तुरुन्त आफ्ना कुकुरहरु सरकारलाई बुझाउन आदेश दिएको छ ताकी कुकुरको मासु बेचेर जनताको पेट भर्न सकियोस् । आफूले पालेका कुकुर सरकालाई नबुझाउनेले का’र’वाही भोग्नु पर्नेछ ।
सरकारले कुकुर पाल्नु ‘बुर्जुवा’ कार्य भएको ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । हो भनेको छ र पाल्तु कुकुरहरू हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको छ ताकि ककुर मा’रे’र मासुको लागि रेष्टुरेन्टहरूमा उपलब्ध गराउन सकियो ।
कोरियामा अहिले खाद्यान्न अभाव छ । उत्तर कोरियाका शासक किम जोंगले जुलाईमा घोषणा गरे कि घरपालुवा जनावर राख्नु अब कानूनको बिरूद्ध छ । अधिकारीहरूले प्योंगयांगमा कुकुर पालिएका घरहरू पहिचान गर्दै छन् र उनीहरूलाई चारैतिर घेरेका छन् । केहि कुकुरहरू राज्यको चिडियाखानामा पठाइनेछ र कुकुरको मांस रेस्टुरेन्टहरूमा बेचिनेछ ।
उनले कुकुरलाई घरमा राख्नुलाई “बुर्जुवा विचारधाराको दाग लाग्ने प्रवृत्ति” भनेर घोषणा गरेको एक अधिकारीले दक्षिण कोरियाको चोसन इल्बो अखबारलाई भनेका छन् । अधिकारीहरूले घरपालुवा जनावरहरूको पाल्ने घरपरिवारको पहिचान गरेर कुकुर जफत गरेर लैजान थालेका छन् ।
कोरियाली प्रायद्वीपमा कुकुरको मासु लामो समयदेखि नै स्वादिष्ट पदार्थको रूपमा लिइएको छ, यद्यपि दक्षिण कोरियामा कुकुरहरू खाने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ। अझै पनि, अनुमानित १ लाख कुकुरहरू दक्षिणमा हरेक वर्ष खपत हुने फार्महरूमा हुर्काइन्छन्।
मानिसहरु उत्तर कोरियामा कुकुरको मासु औप्योंगयांगमा समर्पित कुकुर रेस्टुरेन्टहरू छन्। तातो र आर्द्र गर्मी महिनाहरूमा कुकुरको मासु सबैभन्दा लोकप्रिय छ किनकि यो ऊर्जा र सहनशक्ति प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ। घरमा कुकुर पाल्नेहरुले उनको निर्णयको विराध गरेका छन् ।
बिहीबार आफ्नो पोलिटब्युरोको बैठकमा भनिएको छ कि बाढीले देशलाई गम्भीर क्षति भएको छ, तर यसले बाह्य सहयोग लिने अवस्था छैन । किनभने अहिले कोरोनाका कारण सबैको उस्तै अवस्था छ ।